रंगशाला किन भत्काए ? पक्राउ परेका सुरेन्द्र विकको श्रीमतीले उल्टै धुर्मुसलाई यस्तो भनिन् ! (भिडियो हेर्नुहोस)
किन भत्काए रंगशाला? पक्राउ परेका सुरेन्द्र विकको श्रीमती यसो भन्छिन् ! (भिडियो हेर्नुहोस)
रामपुरमा निर्माणाधीन गौतम बु्द्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माणस्थलमा लगाइएको जस्ताको बार भत्काउने मुख्य योजनाकार प्रकाश कँडेल पक्राउ परेका छन् ।
कँडेलसँगै घटनामा संलग्न अन्य १६ जनालाई पनि प्रहरीले पक्रेको छ । रंगशाला निर्माणस्थलमा लगाइएको बार कँडेल नेतृत्वको समूहले बुधबार भत्काएका थिए । बार भत्काउने क्रममा उनीहरुले कर्मचारीहरुलाई समेत धम्क्याएको धुर्मस–सुन्तली फाउण्डेशनको भनाइ छ ।
निर्माण कार्य स्थगित
भिडियो हेर्नुहोस ! (नमस्ते फिल्मि टिभी)